मेरो प्रस्ताव छ, मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्डलाई प्रचण्डपथ नामकरण गरौँ ।
१७ मंसिर २०७३ शुक्रबार
ठाउँमा काम !
मोहन मैनालीको पुस्तक मान्ठा डराएको जुगमा एक पात्र छन्, लालबहादुर रावत । बाजुराको अंगउपानी, पाण्डुसेनका रावतले द्वन्द्वकालमा २१ वर्षे नाति तुला गुमाए । ०५८ मा ‘लालसेना’को खानु पिटाइ खाएका तुला ०५९ मा गाउँ आइपुगेको सेना–पुलिसको जत्थाबाट मारिए । घरभित्र छिरेर ६ जना युवालाई त्यहीँ मारिदिए । तुला र उनका साथीहरु माओवादी थिएनन् । तुलालाई अलि तल ओखरको बोटसम्म लगेर गोली हानेर मारे । मोहन मैनाली द्वन्द्वकालमा दुईचोटि त्यहाँ पुगेका थिए । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ दिइएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला ०६५ मा तेस्रोचोटि त्यहाँ पुगेका मैनाली लालबहादुरको कुरा सुनेर छक्कबक्क पर्छन् । लालबहादुरको परिवारले पैसा लिएन । लालबहादुरले मैनालीसँग भनेका छन्, ‘सरकारको नोक्सान किन गरौँ, भोलि त्यो पैसा अर्काे ठाउँमा काम लाग्ला ।’
अभाव र तनावले टाक्सिएका, त्यसमाथि द्वन्द्वको दबाब र प्रभावले थिलथिलो भएका लालबहादुरले वैधानिक रुपले पाउनुपर्ने पैसा पनि लिएनन् । मानव विकास सूचकांकको पुछारमा रहेका निर्धा, निमुखा, निरक्षर, नि:सहाय, निरीह लालबहादुरहरुले ‘सरकारको किन नोक्सान गरौँ’ भन्दै तिरिदिएको तिरो महागरिब/महाभिखारी ‘विशिष्ट’हरुले पाएका छन् । अलकत्रै पचाउने ‘विशिष्ट’हरु गरिब कि कात्रै किन्ने पैसा नहुँदा पनि ‘सरकारको नोक्सान नगर्ने’ लालबहादुरहरु गरिब ? मानिस गरिब मनले हुन्छ, धनले हुँदैन क्यारे !
नयाँ बसपार्क गोंगबुबाट बेलुका ४ बजे छुट्नुपर्ने बस साढे चारमा छुट्यो । कमिलाको ताँती यति सुस्त कि बल्लतल्ल साढे ८ बजे थानकोट पुगियो । गोंगबुबाट थानकोट पुग्नै चार घन्टा । गजुरीमा खाए खा नखाए घिच पारामा एक्लो होटलमा हुलेपछि निद्राले च्यापि त हाल्यो । सुस्तरी सही, गाडी चलेपछि निद्रा लागिहाल्छ मलाई । मुग्लिन पुगेपछि बिउँझिएँ, भन्नै परेन गाडी रोकिएको भनेर । कमिलाको ताँती त पूरै ठप्प । अन्य कुरा यथावत् रहे बिहान झिसमिसेमै दाङ पुगिसक्नुपर्ने तर भाग्यमा लेखेपछि कसको के लाग्छ, नारायणगढमै उज्यालोमै चिया पिउने सौभाग्य पाएँ । बढीमा १० घन्टा लाग्ने यात्रा दशा लागेर होला, २० घन्टामा दाङ पुगियो । घर जाँदा सास्ती त पाइएको थियो थियो, काठमाडौँ फर्किंदा पनि उही ताल । शत्रुलाई पनि नसराप्नुहोला, नारायणगढ–मुग्लिनको बाटो हिँड्न परोस् भनेर ।
प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धमा जति मान्छे मरे, सडक दुर्घटनामा त्यो भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको तथ्यांक छ । आफ्नो जिल्लामा पर्ने त्यो सडक खण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आँखा गडेदेखि म उनलाई ठूलै सम्मान गर्ने थिएँ । मेरो प्रस्ताव छ, मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्डलाई प्रचण्डपथ नामकरण गरौँ । त्रिभुवन राजपथ, बीपी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग हुन्छ भने प्रचण्डकै जिल्लाको प्रचण्डझैँ ‘ खतरनाक’ बाटोलाई प्रधानमन्त्रीको नाम दिँदा कसैको नोट अफ डिसेन्ट ? प्रचण्ड‘पथ’को पनि स्तरोन्नति हुने, हामीलाई पनि सजिलो !
आप्ना मुनले चायापछि...
बेतालमाण्डौँ बजार बाह्रबिस–७, बाजुरा लेखेको धमिलो बोर्डमुनि उभिएका दलबहादुर रावल, ६३, दुई श्रीमती र आठ सन्तानका ‘ हाकिम’ पनि हुन् । सानैमा बुबा बितेकाले गाउँलेहरुले उनलाई ‘राँडीको छोरा’ पनि भने । ११ वर्षको हुँदा १६ वर्षे केटीसित विवाह बन्धनमा बाँधिए उनी । बड्डी श्रीमतीको डर मानेर उनी नजिकै पर्दैनथे रे सुरुमा । तर, उनी १५ वर्षको हुँदा पहिलो सन्तान चक्रबहादुर जन्मिई त हाल्यो । खै, के कुचक्र परेर हो, चक्रबहादुर नौ वर्षको उमेरमा बार्जुगाडमा डुबेर बिते ।
दलबहादुर ०३६ सालमा कांग्रेसतिर लागे, वडाअध्यक्ष पनि भए । जम्मा गरेर २२ वर्ष इन्डियामा मजदुरी गरे । एक रात मैले उनकैमा खाना खाएँ, रात बसेँ । लामै भलाकुसारीपछि सुत्ने ठाउँ बनाइदिए । भुइँमा पसारिदिएको कुनाको ओछ्यानमा ढलान भएँ । निद्रा लागेको थिएन, डायरी टिपटाप गर्दै थिएँ । उनी कोठामा आए । म सुतेकै अर्काे कुनामा ओछ्यान पसारे । बाहिरिएका उनी हातमा कापी बोकेर भित्रिए ।
मक्किसकेको, धूवाँले रंगिएको कापी मभन्दा पनि जेठो रहेछ । १२ चैत ०४१ को मितिमा लेखेका छन्, ‘मेरो मया पिरतीको अगाध समझना ।’ अर्काे छ : ‘सुनबाडा सुनार्नी सुनाकी गइ सती, बउदल आयो फर्कने हुन् कति !’ ०४२ को मितिमा : ‘राजाले तितरा मार्‍यो डब्बाभरि मासु, बाझकली सम्झ्याका बेला छातीभरि आँसु । उकाली भोक लागीजाली, भुटी लैजाऊ खाजा, आप्ना मुनले चायापछि क्या भुन्या हो राजा !’
रातैभरि न उनी सुते, न म । उनका प्रेम–कहानी, राजनीति–कहानी, परिवार–कहानी, माओवादी–कहानी पढ्न/सुन्न पाएर म दंग ।